Mhinduro yangu kune "kufema" kukurudzira paApple Watch | Ndinobva mac
Kwechinguva ikozvino zviziviso zveapp «Kufema» paApple Watch usasvetuke kwandiri Uye pakupera kwekutamba kuzhinji nemagadzirirwo, mashoma seti uye zvakasiyanasiyana reboots, mhinduro iyo pakupedzisira isingaenderane maererano neotomation, asi inoshanda.
Apple inoita kunge isina mhinduro kudambudziko iri iro handisi iro ndoga rakabatwa, Kufema zviyeuchidzo hazvioneke Uye kunyange chiri chokwadi ichi hachisi chinhu chausingakwanise kugara nacho, zvinonditsamwisa kuti hachishande sezvo chakamboshanda kare.
Chinhu chekutanga chandakaita pane yangu Apple Watch nhepfenyuro 0 kutarisa kugadzirisa iyo Kufema app zvakare. Kuti ndiite izvi, ndakawana marongero e iPhone nekuvhura iyo Apple Watch app uye nekudzvanya pane Yangu yekutarisa tebhu. Ipapo iwe unofanirwa kudzvanya pakufema> Zviyeuchidzo zveKufema (Zviyeuchidzo kufema) uye sarudza kuwanda kwatinoda kugamuchira zviyeuchidzo. Zvese izvi pasina, sezvo zvichiri kusashanda ...
Mhinduro yangu ndeye kushandisa Siri bhora
Nedanho rino ratinoona ndechekuti chiyeuchidzo chinoonekwa zuva nezuva, saka nekudzvanya pairi tinongo chishandisa panguva yatiri kuda kuzorora. Iyi mhinduro isingafadzi nekuti iyo app inofanirwa kutizorodza panguva dzakati, asi ndizvo mhinduro yekushandisa zuva nezuva. Chero zvazvingaitika tinogona kuishandisa nenzira yakakodzera kana tichizviona mune zviziviso zveSiri sphere.
Kufema zviyeuchidzo zvinofanirwa kunge zvichingoitwa otomatiki uye mushandisi-zvakarongwa, asi izvi zvinoita sekunge hazvishande chaizvo paApple Watch yangu uye nevamwe vazhinji vashandisi vakanyunyuta nezvechinhu chimwe chete ichocho. Zviyeuchidzo zvekufema zvinoshanda kwauri here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mhinduro yangu "yekufema" inokurudzira paApple Watch
Mabasa eApple Watch anoenderera mberi achindishamisa uye pachokwadi ndinoda kuyedza imwe, asi handigoni kuiwana.
David hupa akadaro
Pindura kuna David Hupa
Unganidza yako 12-inch MacBook kune network yeEthernet
Apple Inoburitsa Safari Technology Preview 56